IHonduras ikhethe enye indlela yesithathu-i-Geofumadas
IHonduras yakhetha enye indlela yesithathu
«Ngale ndlela, ndikwazisa ukuba ndiyayigxeka le leta yombutho woMbutho waseMelika ngokuhambelana nezibonelelo zeNqaku 143, ngokusebenza kwangoko»
Kuphela oku ndikunqongophala, kufuneka ndivule uluhlu lwezopolitiko kunye nomthetho wamazwe ngamazwe, kuba umcimbi uhamba ixesha elide. Izolo ndathetha nawe ezinokuzikhethela, kunye nezine, ukhetho lwangowesithathu kangangokuba i-Insulza iphakanyiswe ngokubhekiselele kumntu okanye ukuba uRhulumente uthathe isigqibo.
Ihlabathi liya kuvela ngeendaba zokuthi iHonduras yamgxeka incwadi yoMbutho weeMerika zase-American OAS, ngokukhawuleza. Kwaye ngaphambi kokuba oku kuthetha ntoni, siya kwenza ezinye izibonakaliso:
1. Kutheni kuyenza njengale Honduras
Kufuneka ukhunjulwe ukuba ilungu li-State of Honduras, kungekhona igunya labo, ngoko ke ukuba i-OAS ingaboni abaphathi, banokuthi bayenze egameni likarhulumente baze bayidelele loo leta.
Ngoko ke urhulumente uyanyanzelisa ukuba kuye akukho komsipha ucwangco siseko, into sigwetyelwe ngokomthetho kwayo emva kotyelelo Insulza, zeza ukubuza ntoni kodwa ukuqinisa ukuba niyavuma ibuyisele uMongameli Zelaya. Ingxaki iba nzima ... inzima kakhulu.
Ngokutsho koko wakhankanya eendaba, kukho abathile ukuzimisela phezu inxalenye uNobhala Jikelele, ngubani na kwinkqubo kwakhona konyulo, nto leyo nayo esebenzayo ekhohlo njengoko ufuna ukufumana kunye nabaxhasi yamazwe Alba. Isizathu esenza oko ngaphambi kokusongelwa nguHugo Chávez ukuba athathe inxaxheba njengendawo, akukho phendulo elaphuliweyo.
Ngexa urhulumente yethutyana, ukuze igama kodwa ngamazwe libizwe lika, oko usekela izenzo zayo kumanyathelo Zelaya ukuya kwisikhokelo Chavismo, impazamo enkulu yokubangela umongameli ukuya werhamncwa waseCosta Rica njengokungathi Ipakethi ayinayo ingcaciso engqiqo kwaye iya kuba yinto eyenza ihlabathi lonke lingalibali ngokulula. Ukuba kukho izenzo umlinganiseli kulo, kwaba ukumbamba, xelela ihlabathi ... ubuncinane oluhambelana uninzi; Kuya kuba lula kakhulu ukucacisa isenzo esilandelayo kwihlabathi.
2. Kuthetha ukuthini ukuchasa incwadi ye-OAS
Ngokubhekiselele kwinqaku le-143 yileta, ilungu lombutho lingayigxeka ngokubhaliweyo kubhaliweyo kwiNobhala-Jikelele, ngubani oya kunxibelelana namanye amalungu. Nangona kunjalo, kusekho iminyaka emibili ukususela kuloo mhla, ixesha apho le leta iphela, kwaye ukususela ngelo xesha kuya kuba yi-3 ka-Julayi ye-2011 ilizwe liya kuhlukaniswa noMbutho. Nangona inyaniso yokubonakalisa "isiphumo esiphumelelayo" ivulekile ukuba ingaba ingaba le minyaka mibini iyasebenza okanye ayikho.
Ngaphaya isihloko ubuchopho leyo ngethemba uyazi ngokwaneleyo abayaziyo ngesihloko eso, ukuba ukhangela, owasinikayo isibhengezo yaba Vice Chancellor, ngubani na ilungu urhulumente Zelaya, kufuneka avele esithi yingqonyela omtsha ayamkelwa OAS; Kuyabonakala ukuba uzimisele ukuhamba ngapha isaqhwithi kwiinyanga ezintandathu ekhohlo zonyulo ekuthiwa yi-Ephakamileyo kwiNkundla yoNyulo, okanye phambili kubo, lindela Insulza awuphinde bonyulwa njengoNobhala Jikelele kwaye uzame kwakhona abuye.
I-insulza yabuye yathi i-OAS ayisebenzisi ukungenelela kweli lizwe, oko kukuthi, loo mkhuba yeenqanda eziluhlaza okwakubakho ukubuyisela umyalelo ngamagunya njengoko kwakungekho namava amnandi.
3. Yintoni esinokuyilindela?
Imilinganiselo ayinakuxhomekeka, ngakumbi ngobudlelwane bamazwe ngamazwe, kuba nangona kwimeko ye-UN kunye ne-OAS, ebudlelwane bezizwe ezininzi, ezi ziba yimeko yesalathiso okanye imeko yobudlelwane bomhlaba. Oku kuya kuthetha ukuba amazwe amaninzi anesivumelwano sokubambisana anganquma ukuphula okanye ukumisa i-nexuses kunye neengxowa-mali zamanye amazwe ziya kuvalwa.
Kodwa ngaphakathi kukho inkathazo yokwehliswa komthetho, ngabaxhasayo baseZelaya kunye nabaphikisana nesenzo kwaye bawubize ngokubambisana. Yeka olu xinzelelo alulula, umnyango wemfazwe yoluntu sele isondele, ngokukodwa, njengoko ndithe ndatsho ngokugqibela, ukuba kukho inkxaso evela kwimithombo emithathu apho uqoqosho olunqongophelekileyo alukwazi ukuhlala ixesha elide: Inkxaso I-Chavismo, ukungahambisani nokuthengiswa kweziyobisi kunye nolwaphulo-mthetho oluhlelekile.
4. Ezinye iindlela zokuba nethemba
Ndithi nje izinto enizivayo kumajelo eendaba, engakhethi koku, ushaya mina siyazi ukuba yonke into ngeziphetshiwe na ngahlolo ukuba yokuba izenzo ngaphantsi encinane inokusityeda amandla zokulwa kunye namaziko ekuzalisekiseni umsebenzi wabo. Ukuchithwa kweleta ye-OAS ayinakuguqulwa, ngoku ngoku, mhlawumbi umgudu ongekho mbambano wokufuna ingxoxo phakathi kwangaphakathi, kukhokelela kwizigqibo zoluntu ukuqhubela phambili ukhetho okanye ukukhokelela abantu ukuba bavote ngokuxhasa I-Zelaya ukuyeka xa kucacile ukuba uluntu olumxhasa lukhulu kunelo elimgatyayo. Emva ukhetho November, urhulumente kufuneka ubungqina bokuba urhulumente omtsha ozelwe zonyulo wentando yesininzi ... ngubani owaziyo yintoni na izibonelelo apha, ngomso ndiza ukubuza umntu ongaphantsi amangile ezifumana imvula Macondo.
Kukho ukhetho ukuba OAS lisiqwalasele kwakhona, phantsi amalungu ebhodi ecetywayo, cebisa ngokutsha izivakalisi subtext yeleta Honduras, ezifana "Isigqibo unilateral i OAS 'ukuba uqwalasele izithuba esele ikhankanyiwe abalinganiswa ngamazwe ezifana U-Hillary Clinton owathi "umbize enye indlela, kodwa qiniseka ukuba ubona ukuba ukukhwabanisa kubaluleke kakhulu." Ukuba kunjalo, bekuya kuba ngowokuqala kwimbali, kwaye ukuyichaza kwihlabathi akuyi kuba lula.
Kufuneka ukuba sibe nethemba, kuba lowo sisebenza, kwaye ndiyathemba ukuba le ndebe ivelisa utshintsho esingxamisekileyo inxaxheba labemi, ukulwa urhwaphilizo, utshintsho begxeka kwezopolitiko, imigaqo-nkqubo imbuyekezo lwentlalo, phakathi kwabanye. Ukuba le miba ingavuki, akukho tshintsho kumazwe anamaziko athathaka kule ndawo.
Ndiyathanda ukuba isihloko asizange siqalise, ndikhumbula ukuthetha ngeteknoloji.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Honduras: ezinye izinto eziphambeneyo okanye ezifanelekileyo
Post Next Phantse i-10 ibinzana elilodwa le-catracha crisisOkulandelayo "